Haddii aad raadineyso taleefan leh kamarad weyn, ha moogaan Cubot X50 | Androidsis
Telefoon casri ah oo casri ah oo kamarad sare ah, X50 ka Cubot, ugu dambayntii maanta ayaa la iibinayaa. Taleefankan casriga ahi waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa raadinaya aaladda mobilada leh kamarad xallin sare leh iyo qalab awood u leh inay la kulmaan shuruud kasta.
Sida terminal leh dareemayaal waaweyn, Cubot X50 waxay qalabeysaa kamarad afar geesle ah oo awood leh si ay uqaadato sawirada iyo fiidiyowyada ugufiican xaalad kasta. Shirkadda leh tan waxay rabtay inay siiso dhammaan iibsadayaasha dareemayaal weyn oo weyn, kamarad aad u ballaadhan oo ballaadhan, makro xoog leh iyo dareemayaal afraad oo loo yaqaan 'photosensitive'.
1 Tilmaamaha farsamada ee Cubot X50
2 Processor a dhigma
3 RAM iyo kaydinta si loo kaydiyo
4 Batariga inuu socdo maalinta oo dhan
5 64 MP Samsung dareeraha muraayadaha waaweyn
6 Isku xirnaanta iyo nidaamka shaqada
7 Helitaanka Cubot X50
Tilmaamaha farsamada ee Cubot X50
Cubot X50 waxaa lagu dhisay hareeraha 6,67-inji, jirku waa shaashad dhan, ma lahan wareegyo ama dhinac ama sare ama hoose. Waa arrin la tixgelinayo in la arko in baaxadda ay ka dhigeyso mid ka mid ah kuwa yar ee ka faa'iideysanaya dhammaantood isticmaalka codsiyada iyo ciyaaraha fiidiyowga.
Shaashaddu waa Full HD + oo xallinkeedu yahay 2.400 x 1.080 pixels, saamiga dhinaca ayaa ah 20: 9 xagasha daawashaduna waxay ku siinaysaa ballac weyn. Marka taa laga reebo, muuqaal taxaddar leh ayaa ah naqshadeynta, xagga hore iyo xagga dambeba, faahfaahin muhiim ah.
Muuqaalka gadaal, Cubot X50 Waxay u isticmaashaa muraayad AG ah oo gadaal ah si ay u muujiso muuqaal raaxo leh, midabku wuxuu muujinayaa dhawaq cufan marka taleefanka uu kujiro iftiinka qoraxda. Muraayaddan 'AG-ga ah', uma baahnid inaad ka walwasho faro-faraha iyo iskudhafka adiga oo aanad uur qaadin. Waxaa lagu heli karaa laba midab, madow iyo cagaar.
Processor a dhigma
El Cubot X50 wuxuu dhexgalaa gudaha qalabka 'Helio P60' oo ka socda MediaTek, oo ah processor octa-core ah oo leh afar xabbo oo 73GHz Cortex A2 ah iyo laba 53GHz Cortex A2. Tan dambe waxaa loo adeegsadaa waxtarka weyn ee codsiyada, marka lagu daro isticmaalka runtii wuu hooseeyaa oo si dhammaystiran ayuu ugu shaqeeyaa codsiyada dhexdhexaadka ah
Qeybta garaafka casriga cusub ee ka socda Cubot wuxuu leeyahay Mali-G72 MP3 GPU 800MHz, waxqabadka waa la ogaan karaa dhammaan noocyada codsiyada, oo ay ku jiraan ciyaarihii ugu dambeeyay ee suuqa. Waa ku filan tahay dhammaan noocyada hawlgallada wax qabadkuna wuxuu ahaa mid cajiib ah kuraasta imtixaanka ee kala duwan.
RAM iyo kaydinta si loo kaydiyo
Cubot X50 waa taleefan dhaqaajin kara dhammaan noocyada codsiyada mahadsanid xasuusta RAM ee lagu rakibay sida caadiga ah, moduleka waa 8 GB. Labada in la bilaabo iyo in la bilaabo codsiyada, waxay noqon doontaa in ka badan oo ku filan waxayna damaanad qaadeysaa inay la shaqeyso noocyada ugu dambeeyay ee Android dadaal yar.
Intaa waxaa dheer, casriga cusub wuxuu leeyahay 128 GB oo keyd ah, in ka badan meel ku filan oo lagu xafidi karo dhammaan sawiradaada, fiidiyowyada iyo dukumiintiyada muhiimka ah. Moobayl leh kamarad afar gees ah dareemaha dhererkuna waa inuu lahaadaa keyd si uu u keydiyo macluumaad badan.
Batariga inuu socdo maalinta oo dhan
Isticmaalayaashu had iyo jeer waxay raadinayaan taleefan wax qabta oo waxay leedahay baytariyad soconaysa maalinta oo dhan si ay u isticmaali karto marka loo baahdo. Ku habboon isticmaalka caadiga ah sida wicitaanka iyo helitaanka wicitaannada markaad shaqeyneyso saacado badan oo aan dhibaato lahayn.
Waxaa ku jira batari 4.500 mAh ah, lacag kasta oo ka badan saacad waxay noqon doontaa in ka badan maalin iyada oo aan la marin xeedho, shaki la’aan waa mid ka mid ah astaamaha haddii aad raadineyso taleefan tayo sare leh oo leh batteri awood badan. Ku Cubot X50 sida kuwa kale waxay isku daraan amar ku bixin deg deg ah oo waxay u taagan tahay wax ku oolnimada sidoo kale mahadnaqa Android 11.
64 MP Samsung dareeraha muraayadaha waaweyn
Marka lagu daro istaagida awooda, X50 wuxuu ku iftiimaa iftiinkiisa marka uu sawiro qaadayo markii aad korayso sida dareenka ugu weyn Samsung S5KGW1 of 64 megapixels. Tani marka laga reebo sawirrada tayada sare leh waxay sidoo kale siineysaa ikhtiyaarka lagu duubo fiidiyowga Full HD iyo fiidiyowyo xallin sare
Cubot X50 sidoo kale waxaa ku labisan seddex dareemayaal kale, kan labaad waa qayb ballaadhan oo ballaadhan oo 16 megapixel ah, oo ay weheliso tan ugu horreysa waxay muhiim u noqon doontaa in sawirro laga qaado xaglo wanaagsan. Midka saddexaad waa muraayadaha makrofoonka 5 megapixel oo ka fiican kuwa badan oo ka mid ah taleefannada kale ee dhex dhexaadka ah ee suuqa yaalla.
Ugu dambeyntiina, waxaa mudan in la xuso dareeraha afaraad, waa 0,3 megapixels, marka laga reebo qabashada iftiinka hoose wuxuu si weyn u hagaajiyaa, kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirro ka qaaddo adigoon ogaanin inuu habeen yahay. Haddii aad ku sugan tahay meelo aad u dhalaalaya waxay taageero buuxda u noqon doontaa saddexda muraayadood ee kor ku xusan. Waxaa ka mid ah qaabka loo yaqaan "Super Night Mode", oo ku habboon qabashada dhammaan noocyada sawirrada xaaladaha iftiinka yar.
Taleefanka casriga ah ee loo yaqaan Cubot X50 ayaa noqon doona qalab 4G ah Ku darista Helio P60, taas waxay ku dareysaa isku xirnaan kale sida Wi-Fi, Bluetooth, GPS iyo NFC. Waxay leedahay deked maqal, inkasta oo Bluetooth loo isticmaali karo samaacadaha sameecadaha, iyadoo aad loogu raaxeysto marka la isticmaalayo.
X50 wuxuu la yimaadaa noocii ugu dambeeyay ee softiweerka, kabaha ku shaqeeya Android 11 iyo cusbooneysiinta nidaamka ugu dambeeyay, taasoo ka dhigeysa mid amaan ah in la maro oo loo isticmaalo taleefan ahaan. Ahaanshaha nooc saafi ah ayaa ka dhigi doonta terminal deg deg ah isla markaana u ballan qaadaya cusboonaysiinta kala duwan ee soo-saaraha.
Helitaanka Cubot X50
Iibinta Caalamiga ah ee Cubot X50 ayaa bilaabmaysa Maanta oo ay taariikhdu tahay May 17 qiimo jaban oo ah $ 169,99. Qiimaha la dhimay wuxuu bilaaban doonaa laga bilaabo Maajo 17 illaa 20ka Maajo illaa iyo dukaanka rasmiga ah ee Aliexpress. Haddii aad tahay qof xiiseeya sawir qaadista ama qof raadinaya taleefan kamarad awood leh, isha ku hay Cubot X50.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Haddii aad raadineyso taleefan leh kamarad weyn, ha moogaan Cubot X50
Mibro Color Smartwatch, dib u eegis, qeexitaanno iyo qiimo
Barnaamijyada hurdada ee ugu wanaagsan Android